Isitudiyo esipholileyo kufutshane nesikhululo sikaloliwe (yeka i-IRNITU) - I-Airbnb
Isitudiyo esipholileyo kufutshane nesikhululo sikaloliwe (yeka i-IRNITU)
Isitudiyo sikumgama wokuhamba ukusuka kwindawo yokumisa yeYunivesithi yobuGcisa. Indlu ifikeleleka ngokulula kwisikhululo sikaloliwe (i-3 km) ngeteksi -7-8 imizuzu, ngebhasi / i-tram - imizuzu eyi-15-20. Le ndlu ikufuphi ne-IrNITU kunye ne-IrGUPS, ngoko ke ifanelekile kubafundi kula maziko emfundo. Kukho ibhotwe lomkhenkce elikufutshane (iikhilomitha ezi-2), ngoko i-Studio iya kuba nomdla kwiindwendwe ze-World Bandy Championship, ecetywayo ukuba ibanjelwe e-Irkutsk nge-03/28/20-05/04/2020.
Kufuphi iziko lokuthenga "iLermontov", enevenkile enkulu "iSlata" (ukutya) kunye nezinye iivenkile. I-mall nayo inebala lokutya apho unokuthi ubambe intwana yokutya. Kufuphi na kukho ikofu yePizza Mario. Kufuphi kukho utshintshiselwano lwezothutho olugqwesileyo (iibhasi / iitram / iibhasi ezincinci / iitroli), unokuhamba ngokulula kulo naliphi na icala. Ungafika kwiziko ngeteksi ngemizuzu eyi-10-15, ngezithuthi zikawonke-wonke kwimizuzu engama-20-30. Ngelo xesha, i-studio ifumaneka kwintendelezo ezolileyo necocekileyo.
Iziko lommandla weSverdlovsk wase-Irkutsk, indawo yesixeko sabafundi, amaziko amaninzi emfundo. Kukho iicafe ezingabizi kumgama wokuhamba. Kufuphi kukho iindawo zokuthenga ezinkulu ezineevenkile ezinkulu zegrosari. Ukuya kumbindi wesixeko ngeteksi - imizuzu eyi-10, ngezithuthi zikawonke-wonke - imizuzu engama-20.
Ndiya kuphendula yonke imibuzo malunga nendawo yokuhlala ngefowuni.